Isu tiri Top 10 Yemagariro Media Blog! | Martech Zone
Isu tiri yepamusoro gumi Yemagariro Media Blog!
Muvhuro, Ndira 30, 2012 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Zvinogara zvichishamisa kuzivikanwa nevezera rako - asi nhasi chaiko zvinotora kumusoro! Michael Stelzner's Social Media Examiner blog iri, nekure, imwe yeanonyanyo kuzivikanwa, mushe-mushe uye-inonyatso goneswa midhiya midhiya mablog paInternet. Haangori nezvakakura zvemukati uye zvisingaite zviitiko ... iye zvakare anozvipira mukusimudzira vamwe.
Nhasi, bhuku rangu rakatumidzwa semumwe weSocial Media Muongorori Wepamusoro 10 Yemagariro Media mablog. Heino runyorwa rwese:
Yemuromo Miromo - Yemuromo Miromo, iyo brainchild yaFrancisco Rosales, inopa yakadzama uye yakatendeseka inotarisisa pasocial media kushambadzira uye maitiro anokanganisa indasitiri yedu. Iyo saiti ine yakadzama mitsara ine chaiyo-yenyika mienzaniso, uye inotaurira mitsva uye yakaoma misoro.
ViralBlog - ViralBlog inopa rukova rwezuva nezuva rwemagariro enhau mafambiro uye kurudziro kuburikidza nenyaya dzenyaya uye zvimwe zvinonakidza zvinyorwa. Saiti ine yakanaka kwazvo zvemukati nemazano anobatsira uye mazano.
Jeff Bullas - Jeff Bullas inotarisisa kuti mabhizimusi anowanikwa sei online kuburikidza nesocial media. Iyo saiti ine yakanakisa zvemukati ine yakasimba yemagariro midhiya nzwisiso.
Hubze - Hubze yakavaka vateereri nekutarisa pasocial media maitirwo uye matipi pamagariro enhau ekushambadzira. Iyo saiti ine yakanaka yakanaka midhiya, kusanganisira zvinyorwa uye podcast.
Shumba Yekutengesa - Shumba Yekutengesa kubva kuna Marcus Sheridan iri blog inotsvaga kuvaka nharaunda kutenderedza inbound kushambadzira, blogging, bhizinesi uye hupenyu. Iyo saiti inokurudzira yakasimba nharaunda ine hukuru kutora chikamu kuburikidza nemashoko.
Kusundira Zvemagariro - Kusundira Zvemagariro kubva kuStanford Smith inopa inoshanda mablogging matipi uye zviwanikwa kubva patsva maonero. Iyo saiti ine yekugadzira, inodzidzisa uye inoverengwa zvinyorwa zvine zvakadzama-kupfuura-avhareji kuraira.
Heidi Cohen - Heidi Cohen inopa njere dzakangwara pama media enhau enhau uye maitiro, zvese izvi zvichiita kuti zvive nyore nyore. Iyo saiti ine yakazara uye inofungisisa zvemukati.
KushambadziraTech Blog - KushambadziraTech blog inopa tekinoroji-yakatarisana nzira yekushambadzira midhiya. Iyo saiti inovhara dzakasiyana misoro uye midhiya, kusanganisira redhiyo uye vhidhiyo.
Inodiwa Midhiya - Inodiwa Midhiya inochengetedza vaverengi zvazvino pamaindasitiri mafambiro uye maturusi matsva nepo ichipawo mazano uye matekiniki ekushandisa Facebook uye magariro enhau kushambadzira. Iyo saiti ine irworwo ruzivo rwezvino pazvishandiso zvitsva uye mapuratifomu.
SplashMedia - SplashMedia inopa zvinonakidza zvinotora pazano, matipi uye maitiro, nepo SplashCasts yavo ichipa mamwe makuru ebudiriro nyaya. Iyo saiti inoratidzira kushandiswa kukuru kwevhidhiyo show pamwe neakasiyana kutumira nezvakanaka mune zvakadzama-zvemukati zvemukati.
Kutenda kune vashandi uye vatongi vanobva kuSocial Media Examiner. Ini ndakanyatso kuzvininipisa uye ndinotenda rutsigiro rwese rwamakatipa pamusoro pemakore!
Tags: heidi cohenhubzeJeff Bullasfanika midhiyamarcus sharidanKushambadzira Tech Blogkusundira munharaundapasocial media blogmiromo yemagarirochemimediastandford smithshumba yekutengesapamusoro mablogpamusoro pasocial media blogpamusoro gumiyemusic
12 Yakakomba Kumba Peji Elements
Google Panda mu Plain Chirungu
Ndira 30, 2012 na3: 16 PM
Makorokoto! Uku kukudzwa kwakakodzera, uye iwe uri mune inoshamisa kambani! Tinokutendai nekutikurudzira tese.
Ndira 30, 2012 na3: 18 PM
Ndatenda zvikuru, @ twitter-277728414: disqus!
Ndira 30, 2012 na8: 12 PM
Doug, iwe wakanyatsoisa iyo midwest pamepu kana zvasvika kune ruzivo runobatsira uye chirevo chiri kubatsira mabhizinesi mazhinji kuzadzisa uye kupfuura zvinangwa zvavo zvekushambadzira. Iyo yemagariro enhau nharaunda iri kukurirwa nemuchena ruzha. Kutenda nekuve izwi rakajeka reruzivo iro rinotibatsira tese kuita zvirinani, uye kuti zvinhu zviitwe. Makorokoto pane ako akakodzera kukodzera kuzivikanwa.
Ndira 30, 2012 na8: 28 PM
Marty, ndatenda zvikuru. Akanaka kwazvo mazwi kubva kumunhu wandinoremekedza zvakanyanya! (ikozvino dai taigona kutora iyo Midwest kuti ione 😉
Jan 31, 2012 pa 11: 49 AM
Makorokoto. Ichi ndicho chikonzero iwe uri pane yangu bookmark runyorwa.
Makorokoto. Izvi zvinokodzera, iwe unogara uri mumwe wangu wepamusoro enda kunzvimbo kune zvese zvinhu zvemagariro uye webhu
May 13, 2012 pa 7: 44 AM
Pasina mubvunzo Social Media Muongorori iri yepamusoro notch blog mumagariro enhau mablog.
Zviito zvisina kuzvipira zvinogara zvichiripa mukufamba kwenguva. Kubva zvino ndichave
inogara iri mushandisi. Ndinovimba ichandibatsira mukuvandudza hunyanzvi hwangu se